Mila mitondra akanjo ve aho rehefa skateboarding?
Mila kiraro ho an'ny skatebo aho?
Fanontaniana: Mila mofomamy amin'ny skateboard ve aho?
Valiny: Tena misy fanontaniana roa eto: ny voalohany dia:
Mila mitondra akanjo aho rehefa manosihosy?
Eny, manao izany ianao! Raha tsy manana foiben-doza mahagaga eo ambany elatry ny tongotrao ianao, dia manoro ny kiraro fitondrako aho. Fantatrao izay, na dia manana tongotra marefo aza ianao - mitafy kiraro! Misy zavatra be dia be izay mety tsy mandeha tsara rehefa skateboarding izay, tsy misy kiraro, dia angatahanao fotsiny izany.
Midika izany, raha tena te-hanao izany ianao, dia ny adidinao, fa manolotra kiraro aho!
Mipoitra be izany fanontaniana izany miaraka amin'ireo mpifaninana . Manana sipa iray antsoina hoe Kyle aho, izay nanapa-kevitra ny handeha mitaingina ranomandry fa tsy kiraro, tamin'ny herinandro voalohany nianatra ny fomba hanohanana ny lavaka. Ratsy hevitra. Ny tànany dia tahaka ny hamburger amin'izao fotoana izao, ary izy dia hanana marary goavana eo amin'ny elany. Ambonin'izany, amin'ny maha-boninahitra azy, dia rava tanteraka ny marika vaovao. Mampihomehy izao, saingy amin'ny fahamatorana rehetra dia mety ho naratra mafy izy. Mitafy kiraro.
Saingy mila kiraro aho?
Ah. Eto no misy azy. Ara-teknika, tsia, tsy mila kiraro skateurs ianao . Afaka manao booty ianao. Saingy ny tanjona dia, ny kiraro skate dia natao hanampiana anao hifaninana kokoa. Ary marina izany - manampy izy ireo. Ny kiraro skate dia marefo, marefo, ary mahazatra betsaka lavitra be mba hanampy anao hihazona ny biraonao tsaratsara kokoa. Ireo kiraro maingoka amin'ny baotin-tseratsin'ny volana-volana dia manaloka ny andaniny sy ny lela mba hanampy amin'ny fiarovana ny tongotra rehefa manao raharaha ara-teknika.
Ny kiraro mahatalanjona skoteboarding style dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahatsapanao ny solaitrabe amin'ny fanaovana tricks, noho izany dia azonao atao ny misintona ireo tricks hafa. Maro ny kiraro skate izao no nanamafy ny rindrina afovoany mba hanampiana amin'ny ollies na manana pataloha fanampiny manodidina ny kofehy tongotra mba hanampy amin'ny tongotrao. Ny sasany dia manana tadiny fanampiny mba hiarovana ny laisanao mandritra ny ollie.
Ny sasany dia vita avy amin'ny hoditra mahery na manana toetra hafa manokana.
Izany rehetra izany, raha ny marina, ny " Shoes Shoes " dia manampy anao hifaninana kokoa. Nefa tsy mila azy ireo ianao. Raha afaka mividy mpivady ianao, dia miteny aho hoe handeha ho azy. Raha tsy afaka, dia aza avela hanakana anao amin'ny skateboarding. Ataovy fotsiny izay rehetra azonao atao amin'ny tongotrao, ary mivoaha ary mandehana!
'Rub of the Green' amin'ny Lalan'ny Golf
Mitadiava Play Play
Ahoana ny tsy fifanarahana Lalao Lalao amin'ny Stroke Play Regle
Ny tantaran'ny "Boogie"
Ny fototra ijoroan'ny Lalao Soccer
Demo andro golf: inona izy ireo sy ny fomba hahitana azy ireo
Inona no atao hoe Tea Time? Ahoana ny fiasan'ny Tee Times?
Inona ny Tsukahara Vault?
Fomba simika amin'ny solika
Ny Norse God Loki
Biôlôjika sy suffixes: biolojika
Fomba ampidirina tsanganana amin'ny tabilao MySQL
Elements of a Letter to Business Business Good
William Henry Harrison - Filoha fahasivy an'ny Etazonia
Inona no atao hoe Reception?
Lozabe mahatsikaiky no tsy mahatsiravina amin'ny lafiny rehetra
Ming Men, Yuan Qi & ny Kidneys
Inona ny Revolisiona amin'ny Astronomia?
Inona no Standard Standard?
Mitsangàna kamiao cab styles
Fahatakarana ny hafanan'ny maso tsy manjelanjelatra
Ny olana momba ny Molarita
Manao tsangambato mahatsiaro maitso
Inona moa ny fitondran'Andriamanitra?
Kojakojam-pirahalahiana mahasalama: ny vilany na ny fanasan-tanana?
Ny horohorontany Sumatra tamin'ny 26 Desambra 2004
Inona ny SNOOT?
Torohevitra lehibe ho an'ny fitadiavana ny fametahana anarana sy ny fiovan'ny anarana